Swimwear Etna 2013
Ny akanjo i Etna - akanjo maotina sy malefaka amin'ny fandroana akanjo, izay mampahatsiahy ny kilao amin'ny lobaka.
Ny Etna poloney any Etna amin'ny 2013 - dia modely tsara tarehy sy maotina amin'ny fandroana fandroana, izay hampifaly ny fashionista rehetra.
Ny mpamorona ny orinasa dia nanandrana ny tsara indrindra, ary namorona modely tena mahaliana. Ny famoriam-bola dia voatanisa amin'ny loko maizim-be, izay mifanaraka tsara amin'ny endritsiana mamirapiratra. Mazava ho azy, ao anatin'ny famoriam-bola rehetra dia misy modely kiraro mahazatra maoderina. Etna dia manolotra safidy azo itokisana amin'ny vatany be fialam-boly tsara indrindra na fanosihosena.
Ny vaovao momba ny fandroana amin'ny taona 2013 dia vahaolana tsy ampoizina sy malefaka. Tena niavaka ny modelin'ny volombava matevina beige-gray. Ny bodice dia voaravaka amin'ny ravinkazo misy ravina mainty mainty amin'ny endrika ravina, ary ny akanjo dia miloko mavo misy lamba malefaka. Ity modely ity koa dia aseho amin'ny mainty.
Mijery tsara ny akanjo fotsy fotsy manana akanjo maotina tsara tarehy ary miloko marevaka vita amin'ny lamba. Ity modely ity dia azo vidiana amin'ny loko hafa, fa ny modely fotsy dia tena mahafinaritra.
Misy endriny mirindra tsara amin'ny akanjo fotsy fotsy manga amin'ny kintana lehibe matevina. Ny moron-dranomaso sy ny morontongotr'akanjony dia mameno tsara ny endriky ny kiraro. Izy io ihany no hanjaka tanteraka amin'ny hoditra.
Mazava ho azy, ny fanangonana an'i Etna 2013 dia tsy nisy ny modely tamin'ny fanontana. Amin'ny ankapobeny, ny vahaolana ara-jeômetika sy ny loko manga dia manjaka betsaka. Ny modely rehetra dia miavaka amin'ny loko mamirapiratra sy ny karazany: fuchsia, manga, manga, violet.
Ny dikan-teny novolavolaina ihany koa dia niavaka sy tena kanto: io dia fitambarana lamba tsotra miaraka amin'ny printy, sy ny fomba tsy ampoizina ary ny fohy, ary, mazava ho azy, misy ny modely amin'ny vehivavy miaraka amin'ny ruffles sy basques.
Hairstyle mody amin'ny 2014
Fiakanjoan'ny vehivavy - Fahalavoana 2015
Inona no lamaody amin'ny fahavaratra 2015?
Loko volomparasy - fahavaratra 2015
Ny famantarana momba ny toetr'andro
Goldie Hawn sy Kurt Russell dia nifamaly ampahibemaso
Ireo mpankasitraka Charlize Theron liana amin'ny rarin-tsoratry ny mpilalao sarimihetsika: minitra 10 kilao amin'ny 2 herinandro
Akanjo fitondra amin'ny akanjo ho an'ny vehivavy 2016
Toeram-pisakafoanana Victoria Secret 2015
Robert Pattinson sy Kristen Stewart - vaovao farany
Matory miaraka amin'ny ankizy iray
Ny endriky ny saka hoditra Scottish
Fanafody volo ho mangatsiaka
Ireo rahavavy Hadid sy i Serena Williams dia hita tao amin'ny lahatsoratry ny horonantsary "Be Serena"
Karazana varavarana anatiny
Inona no nofinofin'ny tsena?
Mijoroa amin'ny tananao